Hakadyo ku lingaxan dilkii Usaama | isbeddel
← The Raabi Prophesy
Bayaankii al-Qaacida ee dilkii Usaama →
Hakadyo ku lingaxan dilkii Usaama
“Maraykan ku naaloon maayo nabad ilaa aan annagu nabad ugu noolaanno Falasdiin”; “Jihaadku waa soconayaa xitaa haddii aan anigu meesha ka baxo”; “Haddii difaaca carruurta iyo dumarka lagu gawracayo dunida muslinku tahay argagixiso, taariikhdu ha xusto in aan argagixiso nahay”. Waxa jira dad badan oo hadalladaa Usaama bin Laadin ay ugu xardhan yihiin baal dahab ah iyo kuwo aan hoodh ku qoysanayn. Dhabtu se waa in ay ahaayeen ereyo nashqadeeyey sawirka ay yeelanayso taariikhda cusub ee dagaalka diimuhu ugu yaraan nuska hore ee qarnigan. Isagu wuu dhintay (ama shahiiday sida dadka qaar u macaan), laakiin dufanka fikirkiisu wuxuu ahaan doonaan mid subkiya aragtiyo badan oo tiisa ku dhereran.
Sheekh Raashid al-Qannuushi, mufakirkii sameeyay dhaqdhaqaaqa an-Nahda ee islaamiyiinta Tuunis, ayaa xalay ku tilmaamay in dilka Usaama uu baajin doono sumcad xumo dheeraad ah oo islaamka u soo hoyata. Sidii Usaama waxa ka roon sidan ay samaynayaan bulshooyinka carabta ee gadoodsani, ayuu yidhi.
Yaasir as-Sacaatira, saxafiga weyn ee ka faallooda arrimaha dhaqdhaqaaqyada islaamiga ah, ayaa isna dilkiisa ku sheegay hoog cid kasta oo qiiro leh u soo hoyday. Usaama hortii miyaanay gaalo islaamka necbayn? Miyaanu qorshaysnayn duullimaadka Ciraaq iyo Afgaanistaan 9/11 hortii? “Geesi buu ahaa” ayuu yidhi Sacaatira. Geesi iyo Gumeeye mid uu ahaaba maqaalkan lingaxiisu hoos ka muuqdaa waa mid ka mid ah hadalladii ugu caddaaladda badnaa ee laga odhan lahaa qof sida Usaama u mug weyn.
Halkan guji: http://alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentid=11852
Posted by Warfaa on Maajo 5, 2011 in Uncategorized